Imimiselo yeeMoto zeMoto kunye neMigangatho yeSihlalo saseCanada
Ukhuseleko lweMoto yaseKhanada eKhanada
I-Canada inika imigaqo kunye neenkonzo zokuphepha kubazali
Iintsana kunye nabantwana banokutshatyalaliswa ngokukodwa kwingozi ngexesha lengozi zeemoto, kwaye uphando lubonisa ukuba abaninzi abanqatshelwe ngokufanelekileyo kwizihlalo zeemoto okanye ezinye izixhobo. Urhulumente waseCanada ugunyazisa ezininzi ukukhusela abantwana, kuquka ukusetyenziswa kuphela kwezihlalo zeemoto ezibonisa uMarko woKhuseleko weSizwe waseKhanada. Urhulumente uphakamisa ezinye iindlela zokukhusela kwaye unikezela iikliniki zokuhlala kwiikliniki zemfundo kwilizwe lonke.
Iimfuneko zokuthintela kwabantwana baseCanada
Urhulumente waseCanada unikezela ngesikhokelo esithile ekukhetheni nasekusebenziseni iziphazamiso zabantwana, kubandakanywa izihlalo zeemoto, izihlalo ezixhasayo kunye neebhanti zokuhlala. Izothutho Canada inikeza imiyalelo yokusebenzisa izihlalo zeemoto, kunye nokubonelela ngeekliniki zokuhlala ezikhunjini abazali abaya kuzo ukuze bafunde kabanzi malunga nendlela yokukhetha nokusebenzisa ukukhuselwa kwabantwana.
Ngaba ndingayithenga iSihlalo seMoto kwi-United States okanye kwelinye ilizwe langaphandle?
Akukho mthethweni ukungenisa nokusebenzisa isihlalo somoto okanye isihlalo sokhuseleko esingahambelani nemigangatho yokuphepha yaseCanada. Ngenxa yokuba iKhanada ineemfuneko ezikhuselekileyo zokukhupheka kune-United States nakwamanye amazwe amaninzi, abazali abasebenzisa izihlalo zeemoto ezingekho phantsi kweChanada kaninzi baphula umthetho kwaye banokuhlawulwa.
Indlela yokwazi ukuba i-Car Seat Seat yakho i-Legal Canada
Njengamazwe amaninzi, iChanada ineemithetho yayo eyimilawulo elawula izihlalo zeemoto kunye nezinye izithintelo zokukhusela abantwana. Izihlalo zeemoto zezingane kufuneka zihlangabezane neMigangatho yezoThutho zeMoto yeCanada.
Ukuqinisekisa ukuba isihlalo sakho semoto siyahlangabezana nale migangatho, khangela uMarko woKhuseleko weSizwe waseKhanada, ophethe iqabunga lombala kunye negama elithi "iThutho." Urhulumente avimbela ukuthengwa kwezihlalo zeemoto ezivela kwamanye amazwe, anemilinganiselo eyahlukeneyo yokhuseleko.
Ezinye iiNkcazo zoKhuseleko eziza kuQaphela
Ukongezelela kokufakela ngokubanzi kunye nokusetyenziselwa ngokubonelelwa ngeTranshanada, i-agesi iyalumkisa ngokuvumela abantwana ukuba balele ezihlalweni zeemoto okanye ngaphandle kokushiya bodwa kwizihlalo zabo.
I-arhente iphinda ilumkise ngokusebenzisa izihlalo zeemoto ezidlulileyo iintsuku zazo zokuphelelwa yisikhathi kwaye ikhuthaze ukubhalisa iisethi zokukhusela ezitsha ukuze abathengi banokufumana isaziso sokukhumbula.
Yule Ukupheka & Recipes
Iiprogram zeNkwenkwezi zeNkwenkwezi zeZikolo eziPhakamileyo
Iintlanganiso zeBusiness ngesiNgesi
I-BRP ka-2009 Ingaba yi-Spyder SE5 Review
Ngaba iCape Triple jump Tips
Amadoda aphezulu kunawo onke kwiMiziki yelizwe
Indlela yokusebenzisa isichazo 'Coup de Foudre'
Ukuhla kweMandla eManyano
Uluhlu lwePritzker Architecture List of Laureates
UMTHETHO ophantsi weSigaba?